U-Elena Sai ubonakalisa umgangatho omkhulu kupeyinti lwedijithali | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umzobo wedijithali ka-Elena Sai kunye namantombazana akhe ayoyikisayo
Ngoku sinethamsanqa elaneleyo lokungena kwifayile ye- inkqubo yoyilo ngeYouTube ngu-Elena Sai ukuze ufunde ngendlela esebenza ngayo legcisa. Elona thuba lihle kwabo bazifundisayo abafuna indlela yokuguqula ubuchule babo kwaye bafunde kwabanye amagcisa abangazifihliyo indlela yokubuyisa ubuso obunomtsalane njengaleyo ipeyintwe yiSayi.
Sai ngu umculi osekwe eUkraine okusonwabisa ngolunye lweyona minqweno yakhe mikhulu: upeyinta ubuso babasetyhini ngothintelo lobumnyama. Kumnyama ngakumbi kumfanekiso esinayo phezulu apho intaka entle idlulile njengoko sinokucinga ngegazi eliphuma emlonyeni wayo.
Nge ubuchule obugqwesileyo kwimizobo yedijithaliU-Sai usisa phambi kweefoto zokuqala azinikezelayo kwi-Photoshop yakhe ukuze sifunde indlela ekubetheni kwakhe oku kungenantsingiselo, esenza isiphelo sobugcisa bakhe.
Iphi emva koko faka ukusondeza ukuya kwiinkcukacha kunye nefayile yezithunzi kunye nokubonakaliswa ngokuchukumisa okufihlakeleyo kunye nokukhethwa kakuhle kweebrashi. Lo mbandela ubaluleke kakhulu, kuba uya kusivumela ukuba siwuvale umsebenzi ngokusondeleyo, ngokungathi siphambi kwephepha kunye namalahle.
Ukukhangela kwi-hyperrealism ngomgangatho wayo omkhulu, kodwa oko iyagqwetha kancinci ukuyimitha ngento elungele ngakumbi umzekeliso. Ikwayile nto kanye emnika isitayile sakhe, into ebalulekileyo ukuze akwazi ukubonakala kwihlabathi elinobugcisa, apho ngamanye amaxesha kubonakala ngathi yonke into ilula. Kusoloko kufuneka umgudu omkhulu.
Unayo iDeviantArt yakhe kweli qhagamshelo ukulandela yonke imisebenzi yakhe nezinto asixelela zona phambi kwento enkulu yobugcisa Echaza into nganye kwimisebenzi yakhe yedijithali. Omnye wabo bapeyinti bamele ukulandela ukuze bamangaliswe bubuchule beFotohop kunye nokupeyinta kwedijithali.
Ungaphoswa UKura Huang kunye nodoli wakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Umzobo wedijithali ka-Elena Sai kunye namantombazana akhe ayoyikisayo
Iimpawu ezigqwesileyo ezingalunganga
Le yibhodi yamabali yenye yeziganeko zeMidlalo yeTrone